Ama-apula | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Yiziphi izinzuzo kanye nokulimala kwama-apula
Apple iyisithelo esithandwa kakhulu nesithandekayo esivela ekudleni kwethu unyaka wonke ngezihumusho ezahlukene. Esikhathini esifudumele, ungadla izithelo ezintsha noma eziphekiwe, futhi ngesikhathi sokubandayo kufika izinhlobo ezihlukahlukene. Ukuze ama-apula afake umzimba ukuthi uzuze futhi ulimale kuphela, wawudinga ukucabangela ukulinganiselwa.
Ziyini izinzuzo zama-apula: ukusetshenziswa nokuphikisana
I-Apple kanye namagilebhisi, i-banana, imango kanye ne-orange iphakathi kwezinhlanu ezivame kakhulu nezithelo ezivamile emhlabeni. Ngama-latitudes ethu, i-apula yizithelo zombolo eyodwa. Siyazi kahle ukunambitheka kwabo ebuntwaneni bese siyazi ukuthi izinzuzo zama-apula zinkulu. Umuntu uhlakulela i-apula iminyaka eyizinkulungwane eziningana.
Imithetho yokutshala izihlahla zama-apula entwasahlobo: lapho ukutshala, ukutshala, amaphutha amakhulu lapho utshala
Uma ufuna ukutshala isithelo sesithelo se-apula esakhiweni sakho noma ukutshala umuthi owodwa nje, bese uthola izitshalo eziningi, kufanele uqale wazi ukuthi ungayenza kanjani kahle: indlela yokutshala i-apula, lapho uhlwanyela ngqo entwasahlobo, indawo ozoyikhetha ukunamathela kanye n.
Amapula e-Rannetki: incazelo, izici, ukulima
Ama-apula e-Rannet angatholakala emadijini amaningi, ikakhulukazi eSiberia. Lesi sithelo siyingxenye yesigamu, kepha ama-apula awalahlekelwa ukunambitheka nokugqama kwawo. I-apula ithathwa njengomuthi ongathembeki wesithelo, futhi ngokunakekelwa kahle ungathela izithelo iminyaka eyishumi nanhlanu. Uma wenza izihlahla nezilonda njalo, ungathola isivuno esihle iminyaka eminingi.
Indlela yokwenza i-apula iwayini: iresiphi yokupheka ekhaya
Lapho igama elithi "iwayini" ekhanda livele livele lihlangana nokuhlangana namagilebhisi. Ngempela, iwayini lamagilebhisi luhlobo oluthandwa kakhulu kuloluphuzo oludakayo. Kodwa akukho okuncane okuhlwabusayo futhi okuwusizo ekulinganisweni okungenangqondo kwewayini kusuka kwamanye amajikijolo nezithelo. Namuhla sikhuluma ngendlela yokwenza iwayini le-apula. Izinzuzo kanye nokulimaza komkhiqizo we-Apples zicebile kakhulu kumavithamini nezinye izinto ezizuzisayo.
Indlela yokugcina ama-apula ahlanzekile kuze kufike entwasahlobo
Lapho isivuno sikhulu, siyazibuza ukuthi singagcina kanjani ama-apula asemnandi ebusika. Ngokuvamile inqubo ngokwayo ibonakala ilula, kodwa empeleni kunezinto eziningi kanye nemithetho, ukwehluleka ukuhambisana nalokho okuzoholela ekulahlekelweni kwesitshalo esikhulu. Ngakho-ke, kubalulekile ukwazi ngezinhlobonhlobo zama-apula ngekhwalithi yokugcina engcono, kanye nezimo zokugcina nokucubungula.
Ukupheka kanye nezici ezikhethekile zokupheka ama-apula oqoshiwe ebusika
Ama-apula - enye yezinto ezivame kakhulu nezithengekayo zezithelo emashalofini ezitolo zasekhaya nasemakethe. Zihluke kakhulu ekunambithekeni nasayizi, futhi izitsha ezenziwa kubo zifanelwe ne-cookbook ehlukile. Ngemuva kwalokho, izithelo ezihlwabusayo nezomuthi angeke zidliwe kuphela eziluhlaza, kodwa futhi zilungiselele zonke izinhlobo ze-jams, amapayi, ubhaka kuhhavini, owomile nokunye okuningi.
Apple Moonshine ekhaya
I-Apple moonshine ibhekwa abaningi ukuba yisiphuzo esihle kakhulu. Futhi okubaluleke kakhulu - okungcono kakhulu, ngoba yonke ingadi igcwele ama-apula, futhi ebusika lesi sithelo singathengwa ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Kukhona i-nuance encane - iresiphi efanele. Ngokuvamile, ungakwazi ukuphuza imifino kusuka kunoma imuphi umkhiqizo, kodwa i-apula ewusizo ngokunambitheka nokumnandi okumangalisayo.
Kuyini ama-apula abhakabhaka abusikiweyo wokuncipha kwesisindo, ngesikhathi sokukhulelwa nakwezinye izimo
Isaga sesiNgisi sithi: "Yidla i-apula elilodwa ngosuku futhi uzoba nempilo." Ama-apula anezithelo ezinempilo kakhulu, okungaphezu kwalokho, etholakalayo cishe wonke umuntu. Namuhla sizokhuluma ngama-apula abhakawa-angabe awusizo, asithinta kanjani izitho ezihlukahlukene zomuntu nezinqubo, kanye nemithetho nemigomo yokusebenzisa umkhiqizo onjalo.
Indlela yokucindezela ijusi le-apple ngaphandle kwe-press and juicers ekhaya
Ivila kuphela azi lutho ngezinzuzo zezithelo nezitshalo zemifino. Kodwa ingabe ama-juice anikezwa esitolo ayenesisindo kangaka? Namuhla sizokhuluma ngokuzilungiselela ukulungisa i-apple juice ngosizo lwezindlela ezilula ezithuthukisiwe, nezinzuzo zayo phezu kwejusi yesitolo emasakeni. IJuji elihlanganisiwe noma elisha elifakwe emasakeni lithengisa kakhulu umkhiqizo wesibili, okungukuthi, lenziwe ngezinto ezisetshenziswayo ezisele ngemuva kokucindezelwa ngokuqondile kwezithelo.
Ukwakhiwa, izinzuzo, iresiphi yejusi le-apple
Bambalwa abangaphika izinzuzo ze-apula juice. Kukholelwa ukuthi uma udla i-apula ngosuku, ungakhohlwa ngezifo nokuvakashela odokotela isikhathi eside. Ngingathini nge-apula juice - ukugxila ezintweni eziwusizo kulezi zithelo. Ama-apula atholakalayo esifundeni sethu cishe yonke unyaka wonke, abe nezindleko eziphansi nezindinganiso ezamukelekayo, ngoba wonke umuntu angakwazi ukujabulela isiphuzo esimnandi.
Indlela yokupheka ijusi elimnandi lama-apple ebusika usebenzisa i-juicer
Phakathi kwenani elikhulu leziphuzo zezithelo, i-apple juice iyona engabizi kakhulu futhi ethandwa kakhulu. Ngokusho kokubunjwa kwe-vitamin-mineral, ososayensi bakubiza ngokuthi "amanzi aphilayo", ngoba akugcini nje ukuvuselela umzimba wethu, kodwa futhi kuvimbela izifo ezihlukahlukene, ikakhulukazi uma isiphuzo sishaywa ngokushesha.
Indlela yokwenza i-aple tincture ku-vodka (ngotshwala)
Wonke umuntu uzwile ngezinzuzo ezingenakunqotshwa ze-apula emzimbeni womuntu, okungeke kuthiwa ngokuphuza utshwala obuqinile. Nakuba iningi lezinkinga ezilenga phezu kwakhe lixhunywe ngokuhlukunyezwa ngobuningi kanye nekhwalithi, noma kunjalo, idumela elibi kotshwala linamandla phezu kwamagama anomusa ngaye. Kodwa uma uhlanganisa ama-apula ngotshwala e-aple tincture ye-vodka, khona-ke sithola isiphuzo esikhulu emkhatsini wokukhipha, okwakuthola zonke izimfanelo ezinhle kakhulu zama-apula kanye nokuhle, okwamanje kusekhona utshwala.
Indlela yokwenza i-appleauce ngobisi oluncibilikile: iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo ngezithombe
Ukulungiselela lokhu okulula okumnandi nge-apula puree ngobisi oluncibilikisiwe kuyinto encane kakhulu ekunambeni, ngezinye izikhathi kuthiwa "sissy". Kuhle kakhulu ngama-pancake, ama-pancake kanye namanye ama-dessert. Ungayifaka njengokugcwalisa ama-pie noma wenze ungqimba kumaqebelengwane, noma ungadla nje nge-spoon. Ukulondoloza okunjalo kulula ukupheka esitofu noma ku-cooker kancane.
Indlela yokupheka i-apple jam "Amaminithi amahlanu": iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo ngezithombe
Ukuthandwa kwe-apple jam "I-Pyatiminutka" kuchazwa, okokuqala, ngesikhathi esifushane sokwelashwa kwayo okushisa, okuvumela ukuthi kulondolozwe kakhulu izindawo eziningi ezizuzisayo zezithelo ezakhiwa. Ngaphezu kwalokho, iresiphi elula engadingi amakhono akhethekile e-Culinary, kanye nomphumela omuhle kakhulu wokunambitheka, yenza lo mkhiqizo ube owodwa kakhulu emndenini.
Indlela enhle kunazo zonke yokugcina ama-apula ukupheka ujamu kubo. Iphunga layo elimnandi nelinambitheka elimnandi liyokhumbuza ihlobo futhi lizoletha injabulo yangempela. Sizoletha izindlela zokupheka ezilula futhi zobusuku kulokhu okuthakazelisayo. Mayelana nokunambitheka Ukwenza i-apple jam, akudingekile ukukhetha izinhlobo ezinhle zama-elite.
Apple sauces: izimfihlo zokupheka ekhaya
Ubusika yisikhathi lapho izitsha ezihlukahlukene zilungiselelwa ngamaholide amaningi. Kwenzeka ukuthi u-Olivier no-herring bakhathele ngengubo yesikhumba - Ngifuna ukuzama into entsha, kodwa ngesikhathi esifanayo sebenzisa imikhiqizo ejwayelekile futhi engabizi, njengama-apula. Ungabhekisela ekuphekeni kwamanye amazwe. Isibonelo, yenza ama-chutneys.
Ukupheka i-apple jamu kumpheki ophuthumayo: iresiphi yesinyathelo ngesinyathelo
I-Apple, yiqiniso, ingenye yezithelo ezithandwa kakhulu emhlabeni. Ngaphezu kokusetshenziswa okusha, imikhiqizo ehlukahlukene yenziwa kulezi zithelo ezinhlobonhlobo: iJam, ukulondolozwa, izithelo ezomile, njll. I-Apple jam isakazeke kakhulu. Ukusetshenziswa kwe-multicooker kunciphisa kakhulu inqubo yokulungiselela - sizocabangela izici kulesi sihloko.
Ukupheka i-apple jam kusipheki esincane
Gcwalisa inkomishi yetiyi elishisayo emini ebusika ebusika futhi unikeze izinkumbulo ezifudumele ze-apula jam esedlule. Ukupheka kwale dessert enama-amber, obukhulu nephunga kuningi futhi konke kulula ukulungisa, kodwa, okuphekwe ku-cooker kancane, ngeke kubangele noma iyiphi inkinga eyengeziwe futhi kuzophuma okuhle kakhulu futhi kunempilo.